Minamato makumi matatu Yekubudirira mu WAEC / WASSCE Uye NECO Bvunzo | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Minamato Yebudiriro Mu WAEC / WASSCE Uye NECO bvunzo
30 Minamato Yebudiriro Mu WAEC / WASSCE Uye NECO bvunzo
Dheuteronomio 28:13 Asi Jehovha uchakuita musoro, haangakuiti muswe; iwe uchave uri pamusoro pega, uye haungavi pasi; kana uchiteerera mirairo yaJehovha Mwari wako, yandinokuraira nhasi, kuti uchengete, uiite;
Mwari anodisa zvishuvo zvakanyanya kupfuura zvinhu zvese ndezvekuti vana Vake vabudirire kunze kwemaroto epasipo. Mwari vanogara vachizvikudza pamusoro pevana Vavo kana iko kushanda nemweya wekunaka. Mubhuku raDanieri 1:20, Danieri aive nani kakapetwa kagumi kupfuura vese vezera Rwake pazvinhu zveuchenjeri. Nenzira imwecheteyo, Mwari anoda kuti Vana Vake vese vagare zvakapetwa kagumi kupfuura kune avo vezera mukati imomo vadzidzi nedzimwe nzvimbo. Nhasi uno tichave tichiita minamato yekubudirira mu WAEC / WASSCE uye NECO bvunzo. Munamato uyu we budiriro ichapa simba mudzidzi wese nemweya wakanakisa, mune imwe kuti abude nekubhururuka Colors mune imomo bvunzo. Kana iwe semudzidzi uri kushanda nemweya wakanaka kwazvo, haufanire kucheka makona kuti upase bvunzo, haufanire kuzvibatanidza iwe mukubata zvisirizvo kuti ubudirire pabvunzo dzako, pamwe nekupihwa simba kwe Mweya Mutsvene, iwe unozozviona uchikura kuburikidza nekutsvaira.
WAEC chirevo cheWest African Examination Council, yava kunzi WASSCE, chinova chirevo cheWest African Senior School Chitupa Bvunzo, NECO zvinoreva National Examination Council. Uku ndiko kuongorora kwekupedzisira kwakanyorwa nevadzidzi vakapeta bvunzo dzekusekondari. Kubudirira kweiyi bvunzo ndicho chinhu chikuru chinodiwa kuti upinde muUniversity. Vadzidzi vazhinji vanotya bvunzo idzi, ndosaka iyo sarudzo yekunyatsoongorora bvunzo. Zvinosuruvarisa kuona nhasi kuti mazhinji ezvikoro zvedu muNigeria anoregerera kusabatika kwebvunzo, uye vanotobhadharira mudzidzi imwe mari yekuvabatsira kupasa ipapo bvunzo. Zvikoro zvakawanda zvakazvimiririra zvine mhosva nemaitiro aya. Iyi tsika yakaipa yadzora zvakanyanya tsika yekuverenga yevadzidzi vedu, nepo ivo vachizonetsekana kunyange kuverenga, apo mumwe munhu achavadzidzisa pazuva iro rebvunzo. Hazvishamise kuti vazhinji vevakapedza kudzidza nhasi vane hafu yakabikwa vakapedza kudzidza. Semwana waMwari, Mwari anoda kuti usiyane neruzhinji. Iwe haudi kusarongeka kuti upase chero bvunzo, iwe unofanirwa kudzidza uye zvakare Mwari rubatsiro, ndiyo minamato yekubudirira muWAEC neNECO.
Maitiro Ekupfuura WAEC / WASSCE Uye NECO bvunzo
Kuti upfuure kana kubudirira pabvunzo dzako dze WAEC / WASSCE uye NECO, iwe unofanirwa kungoita zvinhu zviviri:
1) Kudzidza: Nzvimbo yekufunda haigoni kuzombopindurwa. Iko hakuna ramangwana kune Mudzidzi ane usimbe muHumambo. Iwe unofanirwa kudzidza mabhuku ako zvakanyanya, iwe unofanirwa kuenda kumakirasi uye kubvunza mibvunzo yakakodzera. Iwe unofanirwa kutora mukana wezhizha WAEC zvidzidzo uye zvakare neWAEC mibvunzo yakapfuura yekudzokorora. Mwari vanozongobatsira avo vari kuda kutora matanho, Kutenda kunoratidzwa nezviito, kana iwe uchida kuti Mwari vakubatsire mu WAEC bvunzo dzako, unofanira kuratidza hunyoro hwako nekudzidza zvakaoma bvunzo dzako.
2). Minamato: Unoda rubatsiro rwamwari pamusoro pezvinhu zvese. Kudzidza kwakanaka, asi usatsamire pasimba rako chete, pane zvakawanda zvinhu zviri kupfuura iwe, nekudaro, unoda Mwari. Ndakaona vanhu vakangwara vachikundikana bvunzo dzeWAEC, kwete nekuti havana kunyora zvakanaka, asi ipapo nzvimbo yakabatika uye mhedzisiro haina kuburitswa. Ndakaonawo mumwe munhu achirwara zvakaipisisa nguva pfupi yadarika bvunzo dzake dzeWAEC uye anga achirwara zvakanyanya paMibvunzo. Aya ndiwo madhimoni ekunyepedzera, anogona zvakare kunge akasarudzika zviitiko zvakasikwa, zvingave zvisinei nezvavari, minamato inogona kubata vese. Kana uchinamata, unobatana naMwari, Anobata zvemweya, iwe uchibata zvakasikwa. Ndinokukurudzira nhasi, paunenge uchiverenga uye kugadzirira bvunzo dzako dzeWAEC neNECO, rega iyi minamato yekubudirira muWEC / WASSCE uye NECO bvunzo ikutungamire. Uchabudirira muzita raJesu.
1. Ndine nzwisiso kupfuura vadzidzisi vangu nekuti zvipupuriro zvaMwari ndiwo mafungiro angu, muzita raJesu.
2.Ishe, ndipeiwo nzwisiso nehungwaru kuti ndibudirire mune dzangu dzeASSCE uye dze NECO bvunzo muzita raJesu.
3. Ini ndinogashira huchenjeri, ruzivo uye nzwisiso pakugadzirira kwangu.
4. Ngirozi dzaMwari mupenyu, dzikomberedze dzakandikomberedza ikozvino uye enda pamberi pangu kune yekubvunzira imba muzita raJesu.
5. Baba Tenzi, zodzai ruoko rwangu kuti rubudirire, muzita raJesu.
6. Ini ndinoti huchenjeri hwamwari kupindura mibvunzo yese inodiwa zvese zviri zviviri zvirevo nezvinangwa, muzita raJesu.
7. Ndinokunda vamwe vangu kagumi saDanieri, muzita raJesu.
8. Ini ndinowana kunzwirwa tsitsi pamberi pemapurani ese, muzita raJesu.
9. O Ishe, zvakakwana zvese zvine chekuita nekugadzirira kwangu WAEC uye NECO bvunzo.
10. Ndinosunga nekupa pasina mweya yose yekutya, muzita raJesu.
11. Ndinozvisunungura kubva kumweya yega yega yekuvhiringidzika uye yekukanganisa, muzita raJesu ..
12. Baba Ishe, Isa ruoko rwako rwemoto pandangariro dzangu uye undipe ndangariro dzinoyeuka, muzita raJesu.
13. Ishe, ndichengete ndakashingairira muzvakavanzika zvangu.
14. Baba, ndinopa masimba angu ese mauri, muzita raJesu.
15. Maitiro ese aSatan anovavarira kushandura destiny yangu ngaavhiringidzike, muzita raJesu.
16. Vanoshambadzira vese vasina rubatsiro rwekunaka kwangu ngavanyaradzwe, muzita raJesu.
17. Rega chikomborero chakatorwa nemweya yeuroyi chibudiswe, muzita raJesu.
18. Chikomborero chimwe nechimwe chinotorerwa nemweya yakajairwa, ngachirege kusunungurwa, muzita raJesu.
19. Chikomborero chimwe nechimwe chinotorerwa nemweya yemadzitateguru, ngachirege kusunungurwa, muzita raJesu.
20. Rega chikomborero chimwe nechimwe chinotorerwa vavengi vane godo vaburitswe, muzita raJesu.
21. Chikomborero chimwe nechimwe chinotorerwa nevasatani, ngachirege kusunungurwa, muzita raJesu.
22. Chikomborero chimwe nechimwe chinotorerwa dzimba dzakasunungurwa, muzita raJesu.
23. Chikomborero chimwe nechimwe chinotorerwa nevatongi verima, ngachirege kusunungurwa, muzita raJesu.
24. Rega chikomborero chese chinotorerwa nemasimba masimba chisunungurwe, muzita raJesu.
25. Rega zvikomborero zvese zvakabviswa neuipi hwomweya munzvimbo dzekudenga ngatisunungurwe, muzita raJesu.
26. Mese madhimoni ekudzosera madhimoni akaiswa kuzokanganisa kufambira mberi kwangu ngaabatwe, muzita raJesu.
27. Kuzodzwa kwemukundi, kuwa pamusoro pangu, muzita raJesu.
28. Ini ndinodaidzira kusimudzirwa kwangu kwehumwari nhasi, muzita raJesu.
29. Ini ndinokuzivisai kuti ndinofanira kukunda mune bvunzo dzangu dze WAEC neNEC muzita raJesu
30. Tenda Mwari nemhinduro kumunamato wako.
Previous nyayaMinamato makumi matatu yekubudirira kwevana
inotevera30 Minamato Yebudiriro MuJAMB bvunzo
Mbah chinonso Nyamavhuvhu 26, 2020 At 2:28 am
Kubudirira kuri URS muzita raJesu Amen.
Mazuva makumi maviri Minamato uye yekutsanya minamato yeChechi 21